မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2018-03 > ယရှေုသညျ - ထိုမြတ်သောယဇ်ပူဇော်ခြင်း
ယေရှုသည်ဆင်းရဲဒုက္ခမခံရမီကနောက်ဆုံး၌ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွလာခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်သူ့အသက်ကိုစွန့်လွှတ်ရန်အသင့်ရှိခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည်အာရုန်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်များထက်သာလွန်ကြောင်းဖော်ပြသည့်အီဗရာန်လူမျိုးထံစာကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဤအံ့ဖွယ်အမှန်တရားကို ပို၍ ပင်အလေးအနက်ထားကြည့်ကြပါစို့။
ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်သဘာဝအားဖြင့်အပြစ်သားများဖြစ်ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူများကသက်သေထူသည်။ ဖြေရှင်းနည်းကဘာလဲ။ ပOldိညာဉ်ဟောင်း၏သားကောင်များသည်အပြစ်ကိုဖော်ထုတ်။ ယေရှု၏စုံလင်ပြီးအပြီးသတ်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုသာဖော်ထုတ်ပြသခဲ့သည်။ ယေရှုသည်နည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသားကောင်ဖြစ်သည်။
တိရစ္ဆာန်ယဇ်တွေကလူ့အပြစ်ကိုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ယုံကြည်သောပူဇော်ရာယဇ်များနှင့်ပcovenantိညာဉ်ဟောင်းအရဘုရားသခင်သည်ခွင့်လွှတ်မည်ဟုကတိပြုသော်လည်း၎င်းသည်လူသားတို့၏အပြစ်များကိုဖယ်ရှားခြင်းမဟုတ်ဘဲယာယီအပြစ်နှင့်ဖုံးအုပ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်အပြစ်ဖြေသူများမှအပြစ်များကိုသာသတိပြုမိသောယဇ်များကို ထပ်မံ၍ ယဇ်ပူဇော်စရာမလိုပေ။ အပြစ်ဖြေရာနေ့၌ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည်လူမျိုးတို့၏အပြစ်များကိုဖုံးအုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုအပြစ်များကို“ ဆေးကြော။ မ” ခဲ့ကြဘဲလူများသည်ဘုရားသခင်ထံမှခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းကိုအတွင်းကျကျသက်သေခံချက်မရရှိခဲ့ပါ။ အပြစ်များကိုမဖယ်ရှားပေးနိုင်သောနွားနှင့်ဆိတ်တို့၏အသွေးထက် သာ၍ ကောင်းသောယဇ်ပူဇော်ရန်လိုအပ်နေသေးသည်။ ယရှေု၏ပိုကောင်းသောယဇျပူဇျောသာဖွစျနိုငျပါသညျ။
«Darum spricht er, wenn er in die Welt kommt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt; einen Leib aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich: Siehe, ich komme – im Buch steht von mir geschrieben –, dass ich tue, Gott, deinen Willen. Zuerst hatte er gesagt: »Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt und sie gefallen dir nicht«, welche doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er: »Siehe, ich komme, zu tun deinen Willen«. Da hebt er das Erste auf, damit er das Zweite einsetze» (Hebräer 10,5-9) ။
လိုအပ်သောယဇ်ကိုပူဇော်သူမှာလူသားမဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်သာဖြစ်သည်။ ဤကိုးကားချက်ကသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပcovenantိညာဉ်ဟောင်း၏ပူဇော်ရာယဇ်များပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ တိရစ္ဆာန်များကိုယဇ်ပူဇော်သည့်အခါသူတို့ကိုယဇ်ကောင်ဟုခေါ်ဝေါ်ကြပြီးလယ်ကွင်းရှိအသီးအနှံများကိုယဇ်နှင့်အစားအစာများဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ သူတို့အားလုံးသည်သခင်ယေရှု၏ပူဇော်သကာကိုပုံဆောင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်သူ၏လုပ်ဆောင်မှုအချို့ကိုပြသသည်။
“ အကျွန်ုပ်အဘို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီ” ဟူသောစကားစုသည်ဆာလံ ၄၀: ၇ ကိုရည်ညွှန်း။ “ အကျွန်ုပ်နားကိုဖွင့်တော်မူပြီ” ဟူ၍ ပြန်ဆိုထားသည်။ “ ပွင့်လင်းသောနားများ” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်ဘုရားသခင့်အလိုတော်ကိုနားထောင်ရန်နှင့်နာခံရန်လိုလိုလားလားရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်သည်သားတော်အားလူသားခန္ဓာကိုယ်ကိုပေးခဲ့ပြီးမြေကြီးပေါ်ရှိခမည်းတော်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။
ပcovenantိညာဉ်အဟောင်း၏ပူဇော်သကာများကိုဘုရားသခင်မနှစ်သက်ကြောင်းနှစ်ကြိမ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဤစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများသည်မှားသည်သို့မဟုတ်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ယုံကြည်သူများသည်သူတို့ထံမှအကျိုးကျေးဇူးများမရခဲ့ဟုမဆိုလိုပါ။ ဘုရားသခငျသညျယဇျပူဇျောသူတို့၏နာခံမှုရှိသောနှလုံးသားများမှအပဘုရားသခင်ကဲ့သို့သောယဇျပူဇျောမှုမြားကိုဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ နာခံမှုရှိတဲ့နှလုံးကိုဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးပေးဆပ်ပါစေ၊
ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရန်ယေရှုကြွလာခဲ့သည်။ သူ၏အလိုတော်မှာပcovenantိညာဉ်သစ်သည်ပcovenantိညာဉ်ဟောင်းကိုအစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည်သူ၏သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ဒုတိယအကြိမ်တည်ထောင်ရန်ပtoိညာဉ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ဤစာ၏မူလယုဒ - ခရစ်ယာန်စာဖတ်သူများသည်ဤထိတ်လန့်ဖွယ်ကြေညာချက်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြသည် - အဘယ်ကြောင့်ပယ်ရှားထားသောပcovenantိညာဉ်သို့ပြန်သွားရမည်နည်း။
«Weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt» (Hebr. 10,10 NGÜ)။
«Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten, und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füsse gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift (Jer. 31,33-34) heisst es nämlich zunächst: »Der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schliessen werde, wird so aussehen: Ich werde – sagt der Herr – meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben«. Und dann heisst es weiter: »Ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken«. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig» (Hebr. 10,11-18 NGÜ)။
ဟေဗြဲလူမျိုးများထံစာရေးသည့်စာသည်စာရေးသူဟောင်းဖြစ်သောပcovenantိညာဉ်သစ်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သောယေရှုနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့တက်ကြွပြီးနောက်မိမိကိုယ်ကိုဖခင်ဖြစ်စေခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကသူ့အလုပ်ပြီးမြောက်ကြောင်းသက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ပcovenantိညာဉ်တရားဟောင်းဟောင်း၏ဓမ္မအမှုတော်သည်ဘယ်သောအခါမျှပြီးစီးခြင်းမရှိဘဲတနေ့နှင့်တနေ့တူညီသောယဇ်များကိုယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်သည်။ သောင်းနှင့်ချီသောတိရစ္ဆာန်ယဇ်များမအောင်မြင်နိုင်သည့်အရာမှာယေရှုသည်မိမိ၏စုံလင်သောပူဇော်သကာနှင့်အတူထာဝရနှင့်အလုံးစုံအတွက်ပြီးမြောက်စေတော်မူခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်၌ဤအနေအထားရှိကြောင်းမည်သို့သိရသနည်း။ ပcovenantိညာဉ်တရားဟောင်းယဇ်များကသူတို့သည်“ သူတို့၏အပြစ်များကိုနောင်တရစရာမလို” ဟုမပြောနိုင်ပါ။ သို့သော်ပNewိညာဉ်တရားသစ်ယုံကြည်သူများကဘုရားသခင်သည်ယေရှုပြုတော်မူသောကြောင့်သူတို့၏အပြစ်များနှင့်အပြစ်များကိုမှတ်မိတော့မည်မဟုတ်ဟုပြောနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်“ အပြစ်ဖြေရာယဇ်သည်နောက်တဖန်မရှိ” ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များသည်သူ့အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၀ ိညာဉ်တော်မှဆုကျေးဇူးဖြစ်သောဝိညာဉ်ရေးရာနိုးထမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်၏မေးခွန်းကိုထာဝရဖြေရှင်းပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းနှင့်အညီအသက်ရှင်ရန်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် "သန့်ရှင်း" ကြသည်။
«Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum; Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch – das heisst konkret: durch das Opfer seines Leibes – hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen Hohenpriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit; wir sind – bildlich gesprochen – am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen; denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen, und das umso mehr, als – wie ihr selbst feststellen könnt – der Tag näherrückt, an dem der Herr wiederkommt» (Hebr. 10,19-25 NGÜ)။
ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူများအနေဖြင့်ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်မှုသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသာမကအတူတကွဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျူးခရစ်ယာန်များသည်ဥပုသ်နေ့၌အခြားဂျူးများနှင့်အတူတရားဇရပ်၌စုဝေးပြီးနောက်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်း၌တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့သည်ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းမှထွက်ခွာရန်သွေးဆောင်ခံခဲ့ရသည်။ ဟေဗြဲကျမ်းရေးသူတွေကသူတို့မလုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောပြီးအစည်းအဝေးတွေကိုဆက်တက်ဖို့အားပေးခဲ့တယ်။
Unsere Gemeinschaft mit Gott soll sich niemals ichbezogen verhalten. Wir sind zur Gemeinschaft mit anderen Gläubigen in Ortsgemeinden (wie der unseren) berufen. Die Betonung liegt hier im Hebräerbrief nicht auf dem, was ein Gläubiger durch den Kirchenbesuch bekommt, sondern auf dem, was er mit Rücksichtnahme auf andere beiträgt. Der kontinuierliche Besuch der Versammlungen ermutigt unsere Geschwister in Christus und spornt sie an, "einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun". Ein starkes Motiv für diese Beständigkeit ist das Kommen Jesu Christi. Es gibt nur noch eine zweite Stelle, in der das griechische Wort für "Zusammenkunft" im Neuen Testament verwendet wird, und zwar in 2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 2,1, wo es mit "zusammengeführt (NGÜ)» oder «Versammlung (LUT)» übersetzt wird und sich auf die Wiederkunft Jesu am Ende des Zeitalters bezieht.
ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဇွဲရှိခြင်းတို့ဖြင့်ရှေ့သို့တိုးတက်ရန်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်? အစေခံသောဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင့်ဆုံးသောယဇ်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအတွက်လုံလောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြီးပြည့်စုံပြီးအနန္တတန်ခိုးရှင်သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအားကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုဆောင်ကြဉ်းပေးလိမ့်မည်။
Ted Johnson ကပါ